Jizọs Emee Ihe Atụ Abụọ Gbasara Ubi Vaịn na Ndị Ọrụ Ubi Vaịn | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 21:28-46 MAK 12:1-12 LUK 20:9-19
IHE ATỤ JIZỌS MERE GBASARA ỤMỤ NDỊ IKOM ABỤỌ
IHE ATỤ JIZỌS MERE GBASARA NDỊ ỌRỤ UBI VAỊN
Ozugbo Jizọs mechara ka ọnụ mechie ndị isi nchụàjà na ndị okenye ahụ nọ n’ụlọ nsọ, bụ́ ndị jụrụ ya onye nyere ya ikike o ji arụ ọrụ, o meere ha ihe atụ gosiri ụdị ndị ha bụ.
Ọ gwara ha, sị: “Otu nwoke nwere ụmụ abụọ. Mgbe ọ gakwuuru onye nke mbụ, ọ sịrị, ‘Nwa m, gaa rụọ ọrụ taa n’ubi vaịn m.’ Onye nke a sịrị, ‘Agaghị m aga.’ E mesịa, ọ kwara ụta wee gaa. Mgbe ọ bịakwutere onye nke abụọ, gwa ya otu ihe ahụ, onye nke a zara, sị, ‘M ga-aga, nna m,’ ma ọ gaghị. Ònye n’ime ha abụọ mere uche nna ya?” (Matiu 21:28-31, Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Bekee e bipụtara n’afọ 2013) À na-ajụkwa ajụ? Ọ bụ onye nke mbụ ahụ n’ihi na o mechara mee ihe nna ya kwuru.
Jizọs gwara ndị ahụ na-emegide ya, sị: “N’ezie, ana m asị unu na ndị ọnaụtụ na ụmụ nwaanyị akwụna bu unu ụzọ na-abanye n’alaeze Chineke.” Ndị ọnaụtụ na ndị akwụna bu ụzọ jụ ife Chineke. Ma, ha mere ka nwa mbụ ahụ. Ha chegharịrị, ma bido ife Chineke. Ma, ndị isi nchụàjà ahụ na ndị okenye ahụ dị ka nwa nke abụọ ahụ. Ha na-ekwu na ha na-efe Chineke, ma otu abụghị n’ezi. Jizọs gwara ha, sị: “Jọn [Onye Na-eme Baptizim] bịakwutere unu, na-egosi unu ụzọ ezi omume, ma unu ekwereghị ya. Otú ọ dị, ndị ọnaụtụ na ụmụ nwaanyị akwụna kweere ya, ma unu onwe unu, ọ bụ ezie na unu hụrụ nke a, unu akwaghị ụta n’ikpeazụ ka unu wee kwere ya.”—Matiu 21:31, 32.
Jizọs mekwaara ha ihe atụ ọzọ. Na nke ugbu a, o gosiri na ndị ndú okpukpe medịrị ihe karịrị ịghara ife Chineke njọ. Ha bụ nnọọ ndị ọjọọ. Jizọs kwuru, sị: “Otu nwoke kọrọ ubi vaịn, gbaakwa ya ogige gburugburu, ma gwuo olulu nke mmanya si n’ebe nzọchapụta mmanya ga na-agbanye, wuokwa ụlọ elu, ma nyefee ya n’aka ndị ọrụ ubi, wee gawa mba ọzọ. Mgbe oge ruru, o zipụrụ otu ohu ka ọ gakwuru ndị ọrụ ubi ahụ, ka o wee nata ndị ọrụ ubi ahụ ụfọdụ n’ime mkpụrụ nke ubi vaịn ahụ. Ma ha jidere ya, tikasịa ya ahụ́ ma hapụ ya ka ọ lawa n’enyeghị ya ihe ọ bụla. O zipụkwara ohu ọzọ ka ọ gakwuru ha; ha kụkwara nke ahụ ihe n’isi ma menye ya ihere. O wee ziga onye ọzọ, ha gbukwara onye nke ahụ; o zigakwara ọtụtụ ndị ọzọ, bụ́ ndị ha tikasịrị ụfọdụ n’ime ha ahụ́, gbuokwa ụfọdụ n’ime ha.”—Mak 12:1-5.
Ndị Jizọs na-agwa okwu, hà ghọtara ihe ihe atụ a pụtara? Ha nwere ike icheta okwu Aịzaya onye amụma ji katọọ ụmụ Izrel. Ọ sịrị: “Ụlọ Izrel bụ ubi vaịn Jehova nke ụsụụ ndị agha, ndị Juda bụkwa ubi nke na-eme ya obi ụtọ. O wee na-atụ anya ikpe ziri ezi, ma, lee! ọ bụ mmebi iwu ka ọ hụrụ.” (Aịzaya 5:7) Ihe atụ a Jizọs mere yiri nke Aịzaya mere. Onye nwe ubi vaịn ahụ bụ Jehova. Ubi vaịn ahụ bụ mba Izrel. Jehova ji Iwu o nyere ha chebe ha dị ka ubi vaịn a gbara ogige. Jehova zigara ndị amụma ya ka ha kụziere ndị ya ihe ma mee ka ha mịa ezi mkpụrụ.
Ma, “ndị ọrụ ubi” ahụ mekpọrọ ụfọdụ “ndị ohu” e ziteere ha ọnụ, gbuokwa ụfọdụ n’ime ha. Jizọs kwuru, sị: “[Onye nwe ubi vaịn ahụ] ka nwere otu onye ọzọ, bụ́ ọkpara ọ hụrụ n’anya. N’ikpeazụ, o zipụrụ ya ka ọ gakwuru ha, sị, ‘Ha ga-akwanyere ọkpara m ùgwù.’ Ma ndị ọrụ ubi ahụ kwurịtara n’etiti onwe ha, sị, ‘Onye a bụ onye ga-eketa ubi a. Bịanụ ka anyị gbuo ya, ihe nketa a ga-abụkwa nke anyị.’ Ha wee jide ya gbuo.”—Mak 12:6-8.
Jizọs jụziri ndị ndú okpukpe ahụ, sị: “Gịnị ka onye nwe ubi vaịn ahụ ga-eme?” (Mak 12:9) Ha zara ya, sị: “Ebe ọ bụ na ha bụ ndị ọjọọ, ọ ga-abịa bibie ha ajọ mbibi, ọ ga-enyefekwa ubi vaịn ahụ n’aka ndị ọzọ bụ́ ndị ọrụ ubi, ndị ga-enye ya mkpụrụ ya mgbe oge ya ruru.”—Matiu 21:41.
Ha amaghị mgbe ha ji jiri aka ha maa onwe ha ikpe n’ihi na ha so ná “ndị ọrụ ubi” ahụ na-arụrụ Jehova ọrụ ‘n’ubi vaịn’ ya, nke bụ́ mba Izrel. Otu n’ime ihe ndị Jehova chọrọ n’aka ndị ọrụ ubi ya bụ ka ha nwee okwukwe n’Ọkpara ya, bụ́ Mesaya ahụ. Jizọs legidere ndị ndú okpukpe ahụ anya wee sị ha: “Ọ̀ bụ na unu agụtụbeghị akụkụ Akwụkwọ Nsọ a, ‘Nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ, ọ bụ ya ghọrọ nkume isi nkuku bụ́ isi. Ihe a si n’aka Jehova, ọ dịkwa ebube n’anya anyị’?” (Mak 12:10, 11) Jizọs meziri ka ihe ọ na-ekwu doo ha anya. Ọ sịrị ha: “Ọ bụ ya mere m ji asị unu, a ga-anapụ unu alaeze Chineke, werekwa ya nye mba nke na-amị mkpụrụ ya.”—Matiu 21:43.
Ndị odeakwụkwọ na ndị isi nchụàjà ghọtara na Jizọs “bu ha n’obi mee ihe atụ ahụ.” (Luk 20:19) N’ihi ya, ha chọsikwuru ike igbu “onye nketa” ahụ, ya bụ, Jizọs. Ma, ha achọghị igbu Jizọs ozugbo ahụ n’ihi na ha na-atụ ìgwè mmadụ nọ ebe ahụ egwu, n’ihi na ha weere Jizọs ka onye amụma.
Ole ndị ka ụmụ ndị ikom abụọ Jizọs ji mee ihe atụ nọchiri anya ha?
N’ihe atụ nke abụọ Jizọs mere, ònye ka nwoke ahụ “kọrọ ubi vaịn” nọchiri anya ya? Gịnị ka “ubi vaịn” ahụ nọchiri anya ya? Ole ndị ka “ndị ọrụ ubi” ahụ nọchiri anya ha? Ole ndị ka “ndị ohu” ahụ nọchiri anya ha? Ònye ka “onye ga-eketa ubi” ahụ nọchiri anya ya?
Olee ihe a ga-eme “ndị ọrụ ubi” ahụ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Emee Ihe Atụ Abụọ Gbasara Ubi Vaịn
jy isi 106 p. 246-247